Ioksijini ye-aquarium. Iimpawu kunye neemodeli ezilungileyo ze2022 | Ngeentlanzi
Xa sifumana itanki lethu leentlanzi kufuneka sithathele ingqalelo imiba eyahlukeneyo ngaphambi kokuqala ukuyisebenzisa, kuba ezi zilwanyana zifuna iimfuno ezithile ekufuneka zigutyungelwe. Phakathi kwezi mfuno sizifumanayo iipeni zokuzalela, umthengisi wokutya kunye nesihloko esiza kujongana naso namhlanje: ioksijini yasemanzini. I-aeration elungileyo ye-aquarium ibalulekile kulondolozo olufanelekileyo lweentlanzi kunye nomgangatho wamanzi.
Kweli nqaku siza kuzama ukucacisa ukuba isebenza njani ioksijini yeoksijini kunye nomsebenzi ewuzalisekisayo kwaye zeziphi ezona zibalaseleyo zeoksijini ze-aquarium ngokweemfuno zakho. Ngaba uyafuna ukufunda ngakumbi ngayo? Funda ukuze ufumane yonke into.
1 Eyona oksijini ye-aquarium elungileyo
1.1 Sera 7000210 Air 110 Impompo yoMoya yee-Aquariums
1.2 Ngesiqhelo- Iseti yeTank ye-Aquarium eseleyo
1.3 Sera 08814 Umoya 275 R Ukudibanisa
1.4 I-Zacro 2.5w Impompo yoMoya oyi-Oxygen
1.5 Ukumpompoza kweHygger Cwaka Aquarium Air Pump
2 Yintoni ioksijini ye-aquarium?
3 Ngaba kunyanzelekile ukuba ube nayo?
4 Kufuneka ushiye ixesha elingakanani?
5 Iindidi zeeoksijini ze-aquarium
6 Ungayikhetha njani ioksijini ye-aquarium
7 Uyibeka phi kwaye uyibeka phi ioksijini kwi-aquarium
8 Izinto ngokubanzi
Eyona oksijini ye-aquarium elungileyo
IREENUO Impompo yomoya ...
UNICREW Nano Silent Mini ...
Impompi yoMoya yeNICREW yeClassic ...
Ibhedi yeOxygenator Aquarium, ...
Impompo eyi-1.5W Mini Pump ...
Sera 7000210 Air 110 Impompo yoMoya yee-Aquariums
Sera 7000210 110 Umoya XNUMX ...
Yisixhobo seoksijini se-aquarium esinempompo yomoya encinci yeelwandle ezincinci. Enye yeempawu ezithi zibekho Enye yezona zinto zibalaseleyo zeoksijini yeyamanzi amancinci kukuba lutshintsho lweembrane lula. Isebenzisa inkqubo yemodyuli yanamhlanje kwaye ithi cwaka ngexesha lokusetyenziswa. Ilungele ii-aquariums ezinomthamo we-110L / h kwaye inamandla e-3W. Ibandakanya ivalve engabuyisi yokusebenza okungcono. Ungacofa apha ukuthenga le mveliso.
Ngesiqhelo- Iseti yeTank ye-Aquarium eseleyo
Mna-Umdlalo we-Aquarius ...
Inemathiriyeli yeABS, yomelele kwaye yomelele ngokwaneleyo ukuze singabi naxhala lokuyitshintsha minyaka le. Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi kakhulu kuba inenkqubo yokusebenza kwamandla. Inenkqubo yokucinezelwa komoya eyaphambili yokufumana naluphi na uhlobo lokothuka kunye noyilo olunokusetyenziswa cwaka. Awusoze uqaphele ukuba uneoksijini esebenzayo.
Impompo yomoya inayo umthamo we-2l / min womoya ofanayo kwindawo yokuphuma kwaye uneenyawo zerabha ezi-4 uyilo oluchasayo Inceda ukuba isixhobo asihlali. Kuyanceda ukubonelela ngeoksijini eyaneleyo ukuze iintlanzi zikwazi ukuhlala kwimeko entle. Ukulungiselela le nto, ineevalvu zokumisa ezinokuthintela impompo yeoksijini ukuba ingonakali ngexesha lokumka kwamandla. Iyakwazi ukwenza amaqamza kwaye inyuse inqanaba leoksijini kwitanki ngokulula nangokukhawuleza. Ungacofa apha ukuthenga le modeli.
Sera 08814 Umoya 275 R Ukudibanisa
Sera 08814 Air 275 R Kwaye ...
Le modeli yenzelwe ezo ndawo zasemanzini zinobungakanani obuphakathi kunye nobuncinci. Banokutshintsha ngokulula kweembrane kwinto yokuba inenkqubo yemodyuli yale mihla. Ukusetyenziswa kwayo kuthe cwaka kuba awuyi kuqaphela ukuba iyasebenza. Ubungakanani bayo yi-275l / h kwaye inamandla e-4W. Oku kwenza ukuba amandla asetyenziswayo asezantsi. Ine-valve engabuyisiyo yokusebenza okungcono. Ungathenga le modeli ngokunqakraza apha.
I-Zacro 2.5w Impompo yoMoya oyi-Oxygen
I-Zacro 2.5w Impompo yomoya ...
Yenye yeemodeli ezizolileyo ngokwe-aquarium oxygenator kwintengiso. Kwaye isebenzisa iteknoloji ye-teknoloji ehamba phambili ehamba phambili kunye ne-electrolytic plate. Oku kuyenza ithi cwaka ngexesha lokusetyenziswa. Unokuhlengahlengisa isixa sokuhamba kwamanzi esikwaziyo ukwenza ioksijini. Ilungele i-aquariums phakathi kwe-10 kunye ne-80 yeelitha.
Impompo yayo yomoya iyahlengahlengiswa kwaye inokubonelela ngevolumu ephezulu kunye nokuhamba komoya rhoqo. Ilungele ii-aquariums ezincinci kunye neetanki zentlanzi. Inenkqubo yokonga amandla enceda ukunciphisa ukusetyenziswa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50. Amandla ayo yi-2.5W kwaye anokuhlengahlengiswa kuzo zombini ii-aquariums zamanzi amatsha kunye neelwandle zamanzi aselwandle. Thenga le oksijini ye-aquarium ngokunqakraza apha.
Ukumpompoza kweHygger Cwaka Aquarium Air Pump
Impompo yoMoya eyi-1.5W ...
Njengoko igama layo libonisa, yimodeli engenangxolo. Ayinalo naluphi na uhlobo lokuphazamiseka kwe-electromagnetic olunokwenzakalisa impilo yentlanzi. Incinci ngobukhulu kwaye ilula kakhulu. Izinto zayo zinomgangatho ophezulu kwaye zihlala ixesha elide. Inesitayile esilula, esincinci kwaye esifanelekileyo kwaye ubungakanani bayo buncinci buyanceda ukuba ibekwe naphi na. Ilungele iitanki zentlanzi eziphakathi nezincinci.
Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi kakhulu kuya kusinceda songele ityala lombane. Inamandla e-1.5W kuphela kwinqanaba lokuhamba kwe-420ml / min. Kwiitanki zentlanzi Ngaphantsi kweelitha ezingama-50, ingasinceda songe umbane ngokufanelekileyo. Thenga le modeli ngokunqakraza apha.
I-Chialstar-Impompo yomoya ...
Isikhululo somoya esisebenza kabini. Olukhetho olufanelekileyo kwezi ndawo zinamanzi zinenani elikhulu leentlanzi. Inomgangatho olunge kakhulu kwaye ayinzima. Kukulungele ukuthuthwa. Ukusetyenziswa kombane kusezantsi kakhulu, ngenxa yoko unokuqwalaselwa ngokusebenza kwamandla aphezulu.
Isilumkiso (TM) 4 cm ...
Ukuhlala ixesha elide kwi-Aquarium Oxygenator. Esi sixhobo siza kukunceda ufezekise amanqanaba eoksijini afanelekileyo ukuze iintlanzi zikwimeko entle. Igalelo ekunciphiseni i-CO2 kunye nokwandisa i-pH ukwenza izilwanyana zakho zisempilweni. Inokuhlanjwa kwaye ihlale ixesha elide.
Yakamoz - Impompo yomoya ...
Ukonga iAerator. Kule meko sifumana i-aerator efanelekileyo. Iyakwazi ukunciphisa ingxolo eyenzayo xa uyisebenzisa kwaye uyibeke kwimo yezoqoqosho. Inempompo encinci yomoya, ke awuyi kufuna nayiphi na into yokuhombisa ukuyifihla.
1MI Ivenkile yoMpompo loMoya ...
I-oxygenator ethe cwaka. Le modeli ithe cwaka kwaye ayiqwalaselwa. Ukongeza, iyanceda ukugcina amanzi ecocekile
ILixada evulekileyo yomoya ...
Ioksijini kunye noyilo lwangoku. Isebenza ngebhetri ye-lithium kwaye ihlawulisa rhoqo. Oku kuvumela isixhobo ukuba sidityaniswe nepaneli yelanga ukuze sisebenzise amandla ahlaziyekayo. Kukhetho olongezelelekileyo ukuba kunokwenzeka ukuba siphelelwe lubonelelo kwaye sinokusebenzisa amandla elanga.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokuthatha isigqibo sokukhetha eyona oksijini ye-aquarium yakho.
Yintoni ioksijini ye-aquarium?
Ezi mpompo zomoya zizixhobo ezichanekileyo. Umsebenzi wawo kukwenza amaqamza asezantsi e-aquarium ukwazisa ioksijini emanzini. Ikwenza oku ngokusebenzisa ilitye lesasazi eliza kuthi emva koko lidibane noyilo kunye nesimbo setanki leentlanzi. Le oxygenator efakwe emazantsi phantsi zeendawana. Ukuba sifuna ukusifihla, singabeka izinto zokuhombisa ezinjengeentaba-mlilo, igiza okanye isifuba ukulinganisa ukukhutshwa kwamaqamza.
Iibhola ezisasaza oksijini emanzini zincinci. Okukhona zininzi kwaye zincinci ezi bhola, i-aquarium iya kuba ngcono. Xa amaqamza efikelela kumphezulu wamanzi, abangela ukuphazamiseka okuncinci okunceda ukuba kutshintshiselwane ngeegesi phakathi kwamanzi nomoya. Ngale ndlela, iphucula ukuhamba kunye nokungena kweegesi, ukubuyisela indawo yendalo yentlanzi ngendlela efanelekileyo.
Iintlanzi zasemanzini azidingi kuphela ioksijini ukuze ziphile, kodwa izityalo esinazo njengomhombiso (jonga ezona zityalo zilungileyo ze-aquarium). Xa sibeka izityalo zokuhombisa, zisebenzisa ioksijini enyibilikileyo emanzini ukwenza ifotosinthesisi. Sifumana neebhaktiriya emanzini ezisebenzisa ioksijini. Ezi bhaktheriya zinoxanduva lokuguqula initrojeni ibe zizinto ezingenabungozi kwintlanzi zethu. Ngeentsalela ze-nitrogen, sibhekisa kwintsalela yokutya, ilindle, amagqabi afileyo, njl.
Unokuthi, njengoko izityalo zivelisa ioksijini, kwanele ukonyusa i-aquarium. Nangona kunjalo, Iqondo lokusetyenziswa liphezulu kakhulu kunelo lemveliso kuba ebusuku ziyimithombo emininzi yokutya ioksijini kwaye akukho synthesizer. Izityalo zisebenzisa kuphela ifotosinthesisi emini.
Ngaba kunyanzelekile ukuba ube nayo?
Ioksijini esemanzini iyaphela ngokuhamba kwexesha. Ukongeza, amanzi aba mdaka kwaye akajongi nje kubuhle kuphela kodwa ayabenzakalisa nobomi beentlanzi. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba neoksijini ye-aquarium kunye nesixhobo sokucoca amanzi esifanelekileyo phucula umgangatho wayo kunye nobomi beentlanzi zethu. Kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba ukuba itanki lethu leentlanzi linezityalo, ziya kudinga ioksijini ukuze ziphile.
Kufuneka ushiye ixesha elingakanani?
Oku kuxhomekeke kuhlobo lwe-aquarium esinayo, amandla eoksijini kwaye ukuba sinezityalo okanye akunjalo. Izityalo ziya kuvelisa ioksijini emini ngefotosinthesisi. Nangona kunjalo, baya kudla ioksijini ebusuku. Kuxhomekeka kubungakanani besixhobo esinokubangela ioksijini, kungacetyiswa ukuba masisebenze ebusuku okanye ngokomyinge weeyure ezili-16 ngosuku.
Iindidi zeeoksijini ze-aquarium
Kukho iindidi ngeendidi zeoksijini yomoya.
Cwaka: ngabo banamandla aphantsi kunye namandla asezantsi eoksijini. Nangona kunjalo, cwaka kakhulu, zilungele ukusetyenziswa ebusuku.
Ibhetri esebenza: Ziimodeli ezisebenza zihlanganisiwe kwaye zilungele ezo ndawo zasemanzini ziphakathi nezincinci.
Ukuzenzela: Ziindidi zeoksijiniator ye-aquarium enokwenziwa ngezinto zokwenza ekhaya.
Ungayikhetha njani ioksijini ye-aquarium
Ioksijini ye-aquarium kufuneka ilungelelaniswe netanki lakho leentlanzi. Kufuneka sithathele ingqalelo ubungakanani betanki leentlanzi kunye nobungakanani beentlanzi esinazo ngaphakathi, kunye nezityalo. Okukhona iintlanzi nezityalo zininzi, kokukhona sidinga ioksijini eninzi. Ke ngoko, amandla kunye nobungakanani beoksijini ye-aquarium iya kuxhomekeka kwi ukusetyenziswa kombane, ubungakanani be-aquarium kunye nenani leentlanzi kunye nezityalo esinazo.
Uyibeka phi kwaye uyibeka phi ioksijini kwi-aquarium
Ukubeka ioksijini kwi-aquarium, kufuneka siyibeke emazantsi kwaye siyisebenzise ukuze siyidibanise nezinye zezinto zayo zokuhombisa ukuze ibengcono. Into eyenziwa ngabantu abaninzi kukubeka phantsi kweentaba-mlilo ezincinci ezingaqhelekanga kwesixa semibhobho abafuna ukuphuma kuyo. Oku kuyongeza kuyilo lwe-aquarium kancinci.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lweoksijini ye-aquarium ekulungeleyo.
Kuya kufuneka ucinge ukuba xa sinetanki leentlanzi sithintela iintlanzi esinazo kubomi bazo bendalo. Nangona uninzi lweentlanzi abazithengisayo kuthi ziye zakhuliswa ekuthinjweni okoko zazalwa, ezinye ezininzi zingeniswa kwinkqubo yazo yendalo. Nokuba yeyiphi imvelaphi yentlanzi yethu, kufuneka siqinisekise indawo yokuhlala kufutshane neemeko zendalo.
Kule nto kubalulekile ukuyigcina amanzi anomgangatho olungileyo Zombini ezomzimba kunye neekhemikhali, ezine-pH elungileyo, ubushushu, ityuwa (ukuba kukho imfuneko) kunye neoksijini. Ukugcina amanzi ecocekile, iintlobo ezahlukeneyo zokucoca amanzi zisetyenziswa ngokuxhomekeke kwisidingo. Ezinye iintlobo zeentlanzi zimdaka ngakumbi kunezinye ngenxa yendlela yazo yokuphila. Kubo kuya kuba yimfuneko ukufakela isihluzo samanzi esinamandla ngakumbi kwaye utshintshe amanzi amaxesha ngamaxesha.
Ngaphandle kokucoca amanzi, ikwafuna ioksijini elungileyo. Oku kufezekiswa ngeoksijini ye-aquarium. Esi sixhobo asinto yimbi ngaphandle nje kwempompo yomoya elula engabizi kakhulu umsebenzi wayo kukwenza yokwazisa ioksijini kwi-aquarium ukugcina amanzi ekwimeko elungileyo. Iintlanzi ziphefumla ngemiphunga yazo kwaye zisebenzisa ioksijini enyibilikileyo emanzini. Ke, ukuba ayifakwanga ioksijini kakuhle, baya kugqiba ukuntywila. Xa sitshintsha amanzi "siyacoca" ioksijini kwakhona.
Nangona kunjalo, okuzama ngawo onke amaxesha kukulibazisa utshintsho lwamanzi kangangoko kunokwenzeka. Okokuqala, kuba kuyacaphukisa ukutshintsha amanzi rhoqo. Okwesibini, kuba kufuneka songe amanzi. Ngecebo lokucoca elicocekileyo kunye neoksijini ebonelela ngomgangatho emanzini, sinokulibazisa olo tshintsho lwamanzi.
Kubalulekile ukuba ne-oxygenator ye-aquarium kuba sihlala sigqiba ngaphezulu kwi-aquarium kunye nezityalo kwaye sinika ukutya okwaneleyo kwintlanzi. Kulapho ke Imfuno yeoksijini idlula imveliso. Kufuneka siqwalasele neempawu zamanzi. Njengokuba ubushushu be-aquarium busonyuka, isixa seoksijini esinyibilikayo siyancipha. Ke ngoko, kwezo aquariums ze intlanzi yetropiki olu hlobo lwezixhobo luya ludinga ngakumbi.
Ngaphandle kokuba sinendlela yokulinganisa ioksijini kwitanki leentlanzi, kungcono ukufaka ioksijini engqinelana nobungakanani be-aquarium. Ukuba itanki inde, kungcono ukubeka ioksijini ezimbini endaweni enkulu enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ioksijini ye-aquarium